“Festival Sômarôho!” : efa niomana ela ny mponin’i Nosy Be | NewsMada
“Festival Sômarôho!” : efa niomana ela ny mponin’i Nosy Be
Par Taratra sur 26/08/2016
Hita taratra ny fiomanana! Efa tafiditra tsara anatin’ny hetsika handrasan’ny mponin’i Nosy Be ny “Festival Sômarôho!”, raha tarafina tamin’ny “carnaval” fotsiny…
Tsy mangingina toy ny atoandro rehetra ny araben’i Hell Ville… Vao tamin’ny 1 ora tolakandro dia efa tomefy olona ny andaniny sy ankilany amin’ny lalambe an-tampon-tanàna, ary niteraka fitohanan’ny fifamoivoizana mihitsy izany. Olona niandry ny fandalovan’ny “carnaval”, niainga tany amin’ny Rond Point Jirama ka nihazo ny kianjan’Ambodivoanio ireo.
Loko marevaka, karazan-dihy sy fihetsika maro, fitafiana miavaka sy manintona, fanehoana ny mampiavaka ny Nosy isaky ny sehatra, sns. Izany no tazana nandritra ny “carnaval”, ny alarobia teo. Mariky ny fanombohan’ny “Festival Somarôho!” io, izay niditra tamin’ny andiany fahatelo tamin’ity taona ity.
Maro ireo mpandray anjara, na dia somary latsaka kokoa noho ny tamin’ny taon-dasa aza ny fampisehoana nasehon’izy ireo teny an-dalambe. Saika naneho ny hira sy ny dihy ny ankamaroan’ireo mpifaninana, indrindra ireo efa malaza toy ny Zanagasy, ny Jeunes dynamiques de Dzamandjar, Kosovo, Fleur d’Ylang, Nouvelles Génération de Dar-Es-Salam sy ireo fikambanam-behivavy isan-karazany, mpanao ny ohadraha, sns.
Nirona tamin’ny zava-dehibe roa loha ny fandraisam-pitenenan’ireo manam-pahefana tonga nanokatra ny lanonana, tao amin’ny kianjan’Ambodivoanio. Voalohany ny lafiny filaminana sy ny fandraisana vahiny, izay mampalaza an’i Nosy Be ka tokony hotandrovana hatrany. Faharoa, ny hitohizan’ny hetsika hatrany, ho fanandratana ny kolontsaina, fa indrindra koa fampahafantarana hatrany an’i Nosy Be eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Nanamafy kosa i Wawa, izay angady nananana ny hetsika, fa “mifameno ain’izay tanjona izay fa tsy mpifaninana mihitsy ny Donia sy ny Sômaroho”.